Day R Survival famerenana Espaniôla | Androidsis
Iray amin'ireo karazana tiako indrindra ny Survival. Ankafiziko toy ny zaza mijaly mafy arivo mba ho tafavoaka velona amin'ny lalao video amin'ity karazana ity. Efa ela aho no nitady ny lalao ho an'ity Android ity ary hitako ihany tamin'ny farany: Day R Survival dia tsy isalasalana fa ny lalao velona tsara indrindra ho an'ny Android.
Noho izany antony izany no hitondrako anao feno Fanadihadiana horonantsary Day R Survival, lalao tafavoaka velona izay hahagaga anao. Sahinao ve ny manomboka amin'ny dia mampidi-doza mamakivaky faritany radioaktifika hitadiavana ny fianakavianao?
1 Andro R Survival, ny lalao velona farany ho an'ny findainao Android
Andro R Survival, ny lalao velona farany ho an'ny findainao Android
Ny teboka mahaliana voalohany amin'ity lalao ity dia miaraka amin'ny mekanisma lalao: ny interface dia tsotra sy intuitive fa afaka fotoana fohy dia hofehezinao ny rafitra Day R Survival, izay miasa ihany koa saika amin'ny fitaovana rehetra satria kely dia kely ny zavatra takiny.
La Ny mozika lalao dia mametraka tsara ny toe-java-misy amin'ny endrika manjombona izay manampy amin'ny fampidirana anao ao amin'ny Firaisana Sovietika taorian'ny nokleary mahatsiravina. Toerana feno tanàna hampiasainay hahazoana zavatra sy sakafo samihafa hivelomana mandra-pihaonay amin'ny fianakavianay any Vladivostok.
Araka ny efa hitanao tamin'ny fandinihanay video feno an'ity lalao video ity, Ny lalao Day R Survival dia tsy lalao tsotra. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy. Hanombohana, na dia misy tutorial fohy izay manazava ny rafitra interface, tsy manana fampahalalana momba ny lalao izahay; Tsy hainay ny mahandro rano, tsy manana fitaovana, tsy manana akanjo ... Ndao, saika niboridana tao amin'ny faritra iray rotiky ny radioactivity izahay. Inona no mety ho ratsy kokoa?
Eto no miditra ny tontolo iainanao, feno entana radioactivity any amin'ny tanàna ary, raha maharitra ela ianao, dia handoa tena tokoa. Soa ihany miaraka amin'ny fotoana fa hianaranao ny fomba hampihenana an'io olana io, raha maharitra maharitra ianao, satria raha misy zavatra Day R Survival dia mijaly mba ho tafavoaka velona.
Izany dia ampianay ny vermin samihafa izay hihaonantsika mandritra ny lalao ary hiezaka ny hanao sarotra kokoa ny fiainana izy ireo amin'ny fanafihana antsika amin'ny fotoana kely indrindra, manana lalao sarotra tokoa isika nefa mampiankin-doha tokoa.
Aza adino ny fotoana manandrana ny fahavelomana tsara indrindra ho an'ny AndroidAza adino fa misy kinova maimaimpoana amin'ny Survival Day R tsy misy fetr'andro ary izaho, izay nilalao amam-bolana dia afaka manome toky anao aho fa afaka milalao tsara nefa tsy mandoa vola, na dia 2.89 euro aza dia toa iray amin'ireo fampiasam-bola tsara indrindra .
Efa nanandrana ny fahavelomana Day R ve ianao? Ahoana ny hevitrao momba ny lalao?
Andro fahaveloman'ny andro R
Lalao velona tafavoaka velona
Ny isan'ny safidy azo atao
Ny mozika dia miaraka tanteraka amin'ilay lalao
Mety tsy hahaliana ny olon-drehetra ny lalao ataonao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Andro R Survival, famakafakana ny fahavelomana tsara indrindra ho an'ny Android
Fidel Garcia R dia hoy izy:
Tena tsara. .. mitady ny angidimby
Valiny tamin'i Fidel García R
Lino Ramirez dia hoy izy:
hitanao io ??? !!! Mijanona aho
Valiny tamin'i Lino Ramirez
Nametraka azy efa ela aho fa ny mandalo ny lalao tsy mamela ahy hitahiry, zavatra ananan'ny kinova maimaimpoana na hadisoana amin'ny findaiko io.
BENJA ... tokony ho mailo ianao amin'ny toetr'andro, raha misy tafio-drivotra na tadio mahery, hampahafantatra anao ny lalao raha izany dia manoro hevitra anao aho mba tsy handao ny toby mandritra ny fotoana lava yyyy ho fantatrao ahoana ny toetr'andro dia tsindrio fotsiny ny toerana ary avy eo tsy manome zavatra hafa hitady ilay famaritana ,,, raha milaza izy hoe ... masoandro masoandro ... na zavatra mitovy amin'izany dia tsy hanana olana ianao fa raha milaza ... oram-baratra na rivotra mahery mijanona an-tsaha satria na inona na inona ianao, ny reraka dia ny milaza fa hitohy hiakatra ny karandohany ,,, arahaba misy fanontaniana apetraka amiko
Matiti dia hoy izy:
Ahoana no hahazoako fitaovana?
Mamaly an'i Matiti
ip lehilahy dia hoy izy:
Mamaly an'i ip man
Xiaomi dia nilaza indray fa mikendry ny tsenan'i Etazonia izy, saingy mbola tsy misy daty